Brain – စာမကျြနှာ5– Healthy Life Journal
နိုးနေသော်လည်း အသိမရှိသူ . . . (Vegetative State Or Unresponsive Wakefulness Syndrome) အပိုင်း ( ၄ )
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) – ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် တယ်ရီရဲ့အဖြစ်ကတော့ ဒီလိုပါ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ နှလုံးရုတ်တရက် ရပ်ဆိုင်းသွား(Cardiac Arrest)ပြီး အရေးပေါ်ကုသမှုကြောင့် အသက်ပြန်ရှင်လာပေမယ့် ဦးနှောက်ပျက်စီး (Brain Damage)သွားလို့ အကြာကြီး သတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၈ ကစပြီး...
နိုးနေသော်လည်း အသိမရှိသူ . . . (Vegetative State Or Unresponsive Wakefulness Syndrome) အပိုင်း ( ၃ )
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) – ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် ဦးယုစွန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်မ တွေးမိတာလေးတွေကို မိသားစုဘက်၊ ဦးယုစွန်ဘက်နဲ့ ကျွန်မဘက် . . စတဲ့ ရှုထောင့်သုံးနေရာကနေ တွေးကြည့်မိတာလေးတွေကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ မိသားစုဘက်က အမြင် ဦးယုစွန်ကတော့...
နိုးနေသော်လည်း အသိမရှိသူ . . . (၂) (Vegetative State Or Unresponsive Wakefulness Syndrome)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) “ Vegetative State (VS)” ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာက ဘာကိုခေါ်တာလဲ ရုပ်တရားဖြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ရှင်သန်နေပေမယ့်လည်း အသိတရားမရှိတဲ့ဘ၀မျိုး (Intellectual Activity) ကိုဆိုလိုပါတယ်။ အပင်တွေလို ကြီးထွားရှင်သန်နေပေမယ့် ခံစားချက်၊ စဉ်းစားတာလည်းမရှိ၊ တုံ့ပြန်မှုလည်း...
နိုးနေသော်လည်း အသိမရှိသူ . . . (Vegetative State Or Unresponsive Wakefulness Syndrome)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဒီနေ့ လူနာတွေကို Ward Round လှည့်ပတ်ကြည့်စဉ် ဆေးရုံတက်တာ ခြောက်လခန့်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ လူနာဦးယုစွန်ကို ကြည့်မိရင်း အတွေးပေါင်းစုံတွေးမိ၊ ခံစားမိတာလေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဘယ်လိုအတွေးတွေ တွေးမိလာရသလဲဆိုတာကို မပြောခင် ဦးယုစွန်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကို ဦးစွာမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။...
ဦးနှောက်စွမ်းအားကို ကောင်းမွန်စေသည့် အကောင်းဆုံး ဗီတာမင်များ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းမွန်စေပြီး ဦးနှောက်အစွမ်းမြင့်တက်စေဖို့ ဗီတာမင်လေးမျိုးက ထိရောက်ပါတယ်။ – ဗီတာမင်အီး ဗီတာမင်အီးဟာ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အီးပါတဲ့ အစာတွေစားရင် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်နှုန်းကို ကြန့်ကြာစေပါတယ်။ ကန်စွန်းဥ၊ ကောက်နှံတစ်ခုလုံးအစာ၊ အခွံမာစေ့နဲ့ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ...
ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရသော အမျိုးသားတို့ ဦးနှောက်စွမ်းရည် ကောင်းမွန်နေစေမည့် နည်းလမ်းများ
ဦးနှောက်ကို အသုံးချပါ ဦးနှောက်ဟာ သုံးရင်သုံးသလောက် အသုံးဝင်ပြီး မသုံးရင်ဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဦးနှောက် နုပျိုပြီး မှတ်ဥာဏ်ကောင်းမွန်နေစေဖို့ ဆုဒိုကု ကစားတာ၊ ပဟေဠိအဖြေညှိတာတို့ လုပ်ဆောင်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာ စကားအသစ် သင်ယူလေ့လာပါ။ ဒီနည်းလမ်းတွေက ဦးနှောက် အိုမင်းမှုနှုန်းကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ...
သင့်မှတ်ဥာဏ်ကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်သည့် အချက်များ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ဘယ်လိုအလုပ်ပဲ လုပ်လုပ်၊ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်အပေါ်မှာ အရာရာကို ကောင်းကောင်း မှတ်သားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရင် တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ၊ နာမည်တွေကို တွဲဖက်မှတ်မိနေရင်လည်း လူမှုဆက်ဆံရေးမှာပိုပြီး အပေါင်းအသင်းဝင်ဆန့်စေပါတယ်။ (၁) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် အသက်ရှူတဲ့စနစ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့အပြင် အဆုတ်ကင်ဆာ...
ဦးခေါင်းသေးငယ်ခြင်း ( Microcephaly ) ဆိုသည်မှာ
ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဦးခေါင်းက သိသိသာသာသေးငယ်နေပြီး ဦးခေါင်းလုံးပတ်က ပုံမှန်ထက် ပိုသေးငယ်နေတဲ့ အခြေအနေကို Microcephaly လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်က အပြည့်အ၀ မဖွံ့ဖြိုးပါဘူး၊ ဦးနှောက်ကြီးထွားမှုကလည်း ရပ်သွားပါတယ်။ မွေးရာပါ ရောဂါဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အသက်ငယ်ငယ်အရွယ်မှာ စဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အများစုက...
အတွေးလွန်တာကို ဘယ်လို ရပ်တန့်မလဲ
ငွေကြယ်စင်ယံ လေ့လာမှုအရ အမျိုးသမီး ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းက အရာရာကိုအတွေးလွန်၊ အစဉ်းစား လွန်နေတတ်တယ်လို့ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ ဒီလို အတွေးလွန်၊ အစဉ်းစားလွန်တာက ဦးနှောက်ကိုပူပင်သောကတွေနဲ့ ထိခိုက်စေတယ်လို့ စိတ်ပညာရှင်စူဇန်က ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်အနေနဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို အဖြေထွက်ဖို့ စဉ်းစားနေရတဲ့အခါ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို...
ဦးနှောက်အသားပိုကြောင့် ၈၄ ပေါင် ၀ိတ်တက်လာ
မိုးမင်းထွန်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လင်ကွန်းတက္ကသိုလ် သမိုင်း ဘာသာအထူးပြုကျောင်းသူ ဒန်နီစင်ဝါ့ဒ်ဟာ အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ် မှာ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၂၆ ပေါင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့အရပ် ၅ ပေ ၉ လက်မနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ပိန်ပိန်ပါးပါး ကျောင်းသူ...